Super Nhungamiro yekunzwisisa uye kugadzirisa yako imba Wi-Fi. | IPhone nhau
Super Giraidhi kuti unzwisise yako Wi-Fi kubatana uye kuiisa padanho reiyo yako iPhone, Mac uye zvimwe zvishandiso.
Juan Colilla | | IPhone nhau, Apple zvigadzirwa, Zvidzidzo uye zvinyorwa, dzakawanda
Ngatizvibvumirei, kunze kwekunge iwe uchigara muguta hombe kana munzvimbo ine vanhu vakawandisa, zvinowanzoitika kuti haufarire fiber optics mumba mako, uye kunyangwe kana uchiinakidzwa, chii chakatonyanya kuitika ndechekuti iyo router inopihwa neanoshanda haina kusvika kune yako network, ndoda madivayiri ako eApple.
IOS neMac zvishandiso zvave kuvandudza yavo isina waya yekubatanidza machipisi chizvarwa mushure mechizvarwa, zvakanyanya zvekuti kubvira chizvarwa chekupedzisira chavanoteerera yazvino zviyero zveiyo waya yekubatanidzaIsu tiri kutaura chaizvo nezve iyo Wi-Fi kubatana uye iyo 5GHz bhendi ine iyo 802.11ac standard.
Sekuona kwedu mune iyi rondedzero, kutanga neiyo iPhone 6 uye 6 Plus, iyo yazvino mureza yakatanga kutsigirwa. 802.11ac, zvakadaro izvi zvine hunyengeri uye ndezvekuti zvakange zvisiri kusvikira iyo iPhone 6s uye 6s Plus (uye iPads kubva kuAir 2) kwairi MIMO tekinoroji (Multiple Input Multiple Output) iyo inovandudza zvakanyanya kumhanya uko kuchinjisa dhata kunogona kusvika nekuve nemaantena akasiyana ekutumira nekutambira mapaketi panguva imwe chete.
Kazhinji, kunze kwekunge iwe uchigara munzvimbo senge yandakambotsanangura, zvinowanzoitika kuti yako router haina kana kutepfenyura mubato re5GHz, izvi zvakare zvinoreva kuti haizoenderane neyero ye802.11ac, uye nekudaro zvakawandisa hauzokwanisi kunakidzwa neiyo yepamusoro soro waya isina wayaNdicho chikonzero nei muchinyorwa chino isu tichitsanangura yega yega tekinoroji poindi uye poindi zvipi zvaunofanira kufunga nezvako kana uchitenga router.
1 Izvi zvinorevei nezve iyo mbiri bhendi? 2'4Ghz kana 5GHz
1.1 2GHz frequency
1.2 5GHz frequency
2 Ikozvino zvasvika kune iyo Wi-Fi standard, 802.11 chii?
3 Beamforming, mairaira ekurwa
3.1 Beamforming haisi yemunhu wese
3.2 Bhenefiti yekumisikidza
3.3 Beamforming Zvimiro
4 NAS (Network Yakabatanidzwa Yekuchengetedza)
5 Smart QoS, pamwe inonyanya kukosha chinhu
5.1 Kukoshesa traffic
5.2 Minimum bandwidth vimbiso:
6 Kugumisa kwekupedzisira
7 Yakakurudzira ma routers
Izvi zvinorevei nezve iyo mbiri bhendi? 2'4Ghz kana 5GHz
Izvo zvakajairika kuti nenhamba zhinji uye mavara akasanganiswa, ese ari maviri 802.11 a / b / g / n / ac, zvakawandisa MIMO uye zvakawanda GHz Ngatigumei taita nyonganiso uye avo vanonzwisisa zvishoma vanonetsekana, asi zvese izvi zviri nyore pane zvinoita, ndichaedza kuzvitsanangura zvakapusa.
Tisati tatanga kutaura nezve mabhendi aripo uye hunhu hwerimwe nerimwe, tinofanirwa kuziva kuti ndeapi mabhendi eWi-Fi. Iyo Wi-Fi mabhendi Ndiwo mafambiro ari kutumirwa nemasaisai eWi-Fi kuti agamuchire neanogamuchira, kuitira kubatana mune bhendi kuti riitwe, zvese mutumiri uye iye anogamuchira anofanira kuenderana nebhendi raunoda.
Inofanira kunge yakanzwika seChinese kwauri, handiti? Ngatitorei muenzaniso; Zvinogona kutaurwa kuti data kana mapaketi edata (iwo ruzivo rwunotenderera kuburikidza neaya mafambiro, kuburikidza neWi-Fi yedu) anofananidzwa nendege, uye kuti akasiyana mabhendi kana mafiringi akaenzana nehurefu hwendege.
Saka ngatitii iyo 2GHz bhendi kukwira kwendege padhuze nepasi uye iyo 4GHz iri kumusoro, izvi zvinorevei? Ndege dzekare dzakawanda hadzigone kubhururuka pane imwe nhanho (michina mizhinji yechinyakare haienderane nebhendi re5GHz) saka dzinofanirwa kubhururuka dzakadzika kana dzichida kufamba, izvi zvinosanganiswa nenyaya yekuti makambani mazhinji endiza ane ndege dzekare. (dzimba zhinji nemakambani ane ma routers anongoshanda mu5GHz bhendi), izvi zvinoita kuti nzvimbo yepasi yekubhururuka izare nendege zvekuti zvinonetsa kubhururuka pasina tsaona, zvisinei, dzimwe ndege dzemazuva ano dzinogona kusvika pakureba kukuru ( zvishandiso zvinoenderana nebhendi re2GHz) uye kune ndege shoma shoma dzinobhururuka ipapo, izvi zvinoreva kuti kune tsaona dzakawanda shoma, inzvimbo yemhepo isina kugadzikana umo ndege dzine nzvimbo yadzo uye hadzisi dzinotsamwidzana.
Zvichida wakambovhiringidzika nekuenzanisa nendege, kuti uone kana mushure meizvozvo dzidziso chaiyo iri nyore kwauri kugaya; Mazhinji emaraira haazi echimanjemanje anokwanisa kutepfenyura mubato re5GHz, izvi zvinoreva kuti mubhokisi panogona kuve nerunyararo (pasina kuwedzeredza) ma routers makumi matatu anoburitsa mafungu eWi-Fi nguva zhinji ye30GHz uye nerombo rakanaka matatu acho mu2GHz bhendi (kunze kwekunge iwe uchigara mune guta hombe uko kusvika kwefibre kwakamanikidza kumisikidzwa kwemamwe mairaira emazuva ano), chii chinozoitika ipapo? Eya, aya makumi matatu emagetsi emuWi-Fi anokonzeresa kuzadza mubhendi, izvi zvinogona kusimbiswa nekuita scan pamwe nelaptop yedu kana smartphone uye nekuona kuti tine runyorwa rusingaperi rwemaWi-Fi manwe paminwe yedu, sezvo zviripo mazhinji aya maratidziro anopindirana achikonzeresa kukanganiswa uye, mune dzakawanda zviitiko, zvenguva kurasika kwemasaini (kusagadzikana munetiweki).
Ndicho chikonzero ichi kuti iyo 5GHz bhendi yakakosheswa, ibhendi iro parizvino rine mashoma ekuwedzera, asi ndezvekuti ma routers handiwo chete ayo anotepfenyura mune 2GHz bhendi, nharembozha uye kunyangwe microwaves inoburitsa masaisai panguva ino, izvi zvinoreva kuti kana ukamisa microwave, zvishandiso zviri padyo nazvo zvinowana kuomerwa kukuru mukuwana kubatana kwakasimba neiyo router, uye izvi kunyangwe hazvo iyo router inogona kutepfenyura pane gumi nematanhatu makwara e iyo 11GHz bhendi (zvinogona kutaurwa kuti dzakasiyana nzvimbo dzakakwirira mukati medenga remuchadenga), kunyangwe izvi uye kuti yedu router inoshandura migero otomatiki kudzivirira kupindirwa, iyi haizove iyo chete router inozviita, saka isu tinopfuurira mavari uye isu yakakomberedzwa nemidziyo inotepfenyura mu2GHz bhendi.
Kune rimwe divi, bhendi re 5GHz kwete chete ane kugadzikana kukuru kuve nekukanganisa kushoma, asi kunotsigira kumhanya kwepamusoro yekuchinjisa dhata, nepo iyo 2GHz bhendi ichitsigira yakakwira ye4Mbps mune yayo yazvino muyero muyero, iyo 450GHz bhendi inokwanisa kuzadzisa yekumhanyisa kumhanyisa ye5Mbps, inopfuura zvakapetwa kaviri, pasina kukahadzika kusimudzira kunoshamisa zvichienzaniswa neimwe bhendi ine mukana yekusave nematambudziko ekupindira neiyo microwave kana zvimwe zvishandiso.
Zvisinei hachisi chinhu chose chiri goridhe, iyo 5GHz bhendi ine yakapfupika renji uye ine kunetseka kukuru kupinda mukati mezvipingaidzo zvemuviri zvakaita semadziro, zvinogona kutaurwa kuti pasi pemamiriro akafanana, masaisai akaburitswa mubato re5GHz ane 1/3 yehurefu hwerimwe rakaburitswa mubhendi re 2GHz, ndiko kuti, kuti chinokurudzirwa mazuva ano ndechekushandisa zvishandiso zvinoenderana ne «Dual Band».
Nekudaro, zvakanakira nekuipira kwebhendi rega rega zvinotevera:
Inoenderana nehukuru hwakawanda hwese hwekare uye nyowani michina.
Kupinda kwakanaka kwezvipingamupinyi.
Nyeredzi dzavo dzinowanzo dhura.
Kukanganisa kwakawanda, kunyangwe nemidziyo yemumba.
Inononoka kudhinda data kumhanyisa.
Yakakwira yekumhanyisa kumhanya.
Kupindira kushoma, kusingakanganiswe nemidziyo yemumba.
Kuderera kupinda kwezvipingamupinyi zvepanyama.
Kuenderana nemidziyo mitsva (semuenzaniso, kubva ku iPhone 5 kana kumusoro).
Ikozvino zvasvika kune iyo Wi-Fi standard, 802.11 chii?
Pano tine zviyero zvakasiyana, imwe neimwe nyowani pane yapfuura, nezvakanakira nezvayakaipira, zvimwe zvitsva zviri kumashure zvinoenderana Nemidziyo yakagadzirirwa vakuru, vamwe vanoshandisa iyo 2GHz bhendi, vamwe iyo 4GHz bhendi uye kune vamwewo vanoshandisa zvese zviri zviviri (zvekupedzisira zvinonzi Dual Band), pane ese ari matanhatu, tichazviongorora zvese zvichiteerana , kubva kune wekare kusvika kune wazvino uno.
Muna 1997, iyo Institute of Electrical and Electronics Injiniya (IEEE muChirungu) yakagadzira muyero wekutanga weWi-Fi tekinoroji, izvi zvakagamuchira zita rekuti 802.11 maererano neboka raitarisira chirongwa ichi, zvinosuwisa, muyero uyu wakura kudaro kumhanyisa data yekumhanyisa 2 Mbps, kana zvakanyatsojeka uye kuti imi mose munzwisise, yakaenzana ne0MB / s, sezvo 25 Mbps yakaenzana ne1MB / s, emhando dzese dzatichashandisa nzira yekupedzisira ye kuyera kuti zvive nyore kwauri kuti ujaire iyo pfungwa.
Muna 1999 IEEE yakawedzera mwero kune imwe nyowani inonzi 802.11b, iyi nhanho nyowani yakashandisa iyo isinganyorerwe 2GHz bhendi ichiwana kukurumidza kumhanya kwe4MB / s, chimwe chinhu chakafanana nechibatanidza tambo zhinji nhasi.
Ichi chiyero chinofungidzira kudzikiswa kwemitengo kana uchishandisa isina kutemerwa bhendi ye2'4GHz, zvisinei izvi zvinokanganisa mafoni, michina yemicrowave kana chero chimwe chinhu chinoshandisa iyi frequency, izvi zvinokanganisa zvinogona kudzivirirwa nekuisa chiratidzo cheWi-Fi kuburitsa poindi munzvimbo ine hungwaru uye inenzvimbo yepamusoro
Zvipingamupinyi zvinogona kudzivirirwa zviri nyore nekumisikidza router zvakanaka.
Midziyo yemumba inogona kukanganisa chiratidzo kana uchishandisa iyo 2GHz bhendi.
Ichi chiyero chakagadzirwa panguva imwechete se802.11b, yaive yekutanga kushandisa iyo yakarongedzwa 5GHz bhendi, zvisinei izvo zvaisanganisira mutengo wakakwira uye zvakaita kuti irege kufarirwa se802.11b.
802.11a yakaburitswa munzvimbo dzemabhizimusi, bandwidth yayo inosvika 6MB / s, kumhanya kukuru, kunyangwe iyi yaive 75b yakaguma kutonga misha yedu.
Yakakwira data yekumhanyisa kumhanya (6MB / s kana chii chakafanana, 75 Mbps).
Sezvo bhendi re5GHz riri bhendi rinotarisirwa, kuzadza kwayo nemamwe madhiragi asingatenderwe kunodzivirirwa.
Dambudziko rakakura rezvipingamupinyi zvinopinda.
Muna 2002 na2003 mureza mutsva unonzi 802.11g wakaburitswa, wakauya kuzobatanidza zvakanakisa zve802.11b uye 802.11a, 802.11g inotsigira bandwidth inosvika 6MB / s uye inoshandisa kuwanda kwe75 '2GHz kuzadzikisa. hukuru hwakakura uye kupinda kwezvipingamupinyi, ichi chiyero zvakare chiri kumashure chinoenderana ne4b, izvi zvinoreva kuti zvishandiso zvakagadzirirwa muyero wekare uyu zvinoenderana neiyo nyowani pasina chikonzero chekugadzirisa chero chinhu.
Kushandisa iyo 2GHz bhendi inopa hukuru hukuru uye kupinza.
Yekumhanyisa kumhanya inosvika 6MB / s.
Kudzokera kumashure kuenderana ne802.11b.
Mutengo wakakwira kupfuura 802.11b.
Kukanganiswa nekuda kwechikwata chekuzadza.
Kukanganisa nemidziyo yemagetsi kana zvimwe zvishandiso.
Iyo 802.11n standard inozivikanwa zvakare nezita rekuti "Wireless N", izvi zvakauya kuzovandudza kumhanya kana bandwidth yevakatangira nekuisa MIMO tekinoroji (Multiple Input Multiple Output muChirungu), hunyanzvi uhu hunoshandisa inopfuura antenna imwe ku tumira uye ugamuchire data mapakeji panguva imwe chete, nekudaro uchidzivirira kurasikirwa kwevamwe uye pakupedzisira kuvandudza kusimba kwenetiweki.
Muna 2009 zvakatemwa kuti chiyero ichi chinokwanisa kusvika pakumhanyisa kumhanya kwe37MB / s. Ichi chiyero chiri kumashure chinowirirana ne5b uye chinoita kushandiswa kweisina mutemo 802.11GHz bhendi.
Kusimba kwepamusoro nekuda kwekushandiswa kwemaanti akawanda.
Mutengo wacho wakakwirira kupfuura zviyero zvakapfuura.
Networks yakavakirwa pa802.11g uye 802.11b inogona kukanganisa chiratidzo chayo.
Zvishandiso kana zvimwe zvishandiso zvinoshandisa iyo 2GHz bhendi zvinogona kukonzera kupindira.
Uyu ndiwo muyero mutsva, unoshandisa iyo imwechete Dual Band uye MIMO tekinoroji, inosvika kumhanya kwe162'5MB / s mubato re5GHz uye 56'25MB / s mune 2'4GHz bhendi, iri kumashure inoenderana ne 802.11b, g uye n zviyero.
Kudzoreredza kuenderana nematanho ekare anotendera zvishandiso zvekare kuti zvishandise (pasina kunakirwa nezvose zvazvakanakira) zvechiyero ichi.
Iyo yakanakisa bandwidth kana dhata yekumhanyisa kumhanyisa pamabhande ese
Iko kushandiswa kwe MIMO tekinoroji inobvumira kune yakakura network kusimba.
Iyo ine musanganiswa wekumhanya, yakanaka renji uye akasiyana madhigirii ekupinda kwezvipingamupinyi uye kupindirana zvinoenderana nebhendi ratinobatanidza (pane maviri akapatsanurwa Wi-Fi, imwe mubhandi rega rega).
Dual Band MIMO inoreva mutengo wakakwira.
Iyo 2GHz bhendi ichiri kukanganiswa nekukanganisa kwayo maitiro.
Iyo 5GHz bhendi ichiri isina huwandu hwakaenzana neiyo ye2GHz.
Beamforming, mairaira ekurwa
El kuvhenekerwa itekinoroji iyo, mukukosha, inobvumidza kushandiswa kwakanyanya kwemaina eWi-Fi. Ma routers ane beamforming anokwanisa kuziva nzvimbo yemidziyo yakabatana kune yavo Wi-Fi network uye tarisa chiratidzo pavari pachinzvimbo chekuburitsa omni-inoteedzera wave uye nekumirira kuti isvike kumutengi.
Kuti ndikupe zano, kanyanga isina kuumbiridza ingaenzanisike negirobhu uye imwe ine beamforming kune laser, kana girobhu rinobatidza zvakaenzana zvese zvakarikomberedza, kuburitsa mwenje mumativi ese, laser, zvisinei, inoisa mukati mayo danda rechiedza chaizvo rakanangana nepfungwa yatinovavarira.
Beamforming haisi yemunhu wese
Iyi tekinoroji yakaunzwa neiyo 802.11n standard, zvisinei apo IEE payakazviita, haina kutaura kuti kushandiswa kweiyi tekinoroji kunofanirwa kushandiswa sei neichi chiyero, semhedzisiro kuwanda kwemidziyo (ma routers uye vanogamuchira) akaonekwa pamusika nenzira dzakasiyana dzekushandisa kuumbiridza, chinodzokorodza ndechekuti nzira idzi hadzina kushanda pamwe chete, nekuda kweizvi iwe waifanirwa kunge uine router uye chishandiso chakashandisa nzira imwechete yekugadzirisa kuitira kuti ive inowirirana, zvikasadaro yaizo ita senge network Yakajairika Wi-Fi.
Neraki, iyo IEE haina kuita chikanganiso chimwe chete neiyo nyowani 802.11ac chiyero, ikozvino pane nhungamiro dzakatemwa kutevedzera nevagadziri vanoda kushandisa tekinoroji iyi mumidziyo yavo, nenzira iyi, zvishandiso zvese zvinowirirana nekushandisa iyo imwecheteyo nzira yekumisikidza.
Nekuda kwekuita beamforming, tinowana chiratidzo chedu kutarisa pane chishandiso kana zvishandiso zviri kuchishandisa, nekudaro kudzikamisa latency uye kuwedzera huwandu hwehukama.
Isu takaona mabhenefiti eiyi tekinoroji uye mune zvazviri izvo, asi kune zvimwe zvakavanzika kuseri kwayo, semuenzaniso, haazi ese marongedzero anoshandisa iyo 802.11ac standard inoenderana neyekuumba, inowanzo kuve yepamusoro-inoshanda mairaira inogona kushandisa tekinoroji iyi.
Havasi vese vanogamuchira vanogona kunyatso kubatsirwa nazvo kana, zveizvi inofanirwa kunge iine chipu cheWi-Fi chinotsigira MIMOSemuenzaniso, iyo iPhone 6 inogona kugamuchira chiratidzo kubva kune router ine beamforming kuburikidza neiyo 802.11ac standard (iPhone 6 kana yepamusoro inoenderana neiyi standard), zvisinei iyo iPhone 6 haigone kunongedzera kune iyo router, inofanira kutumira mapaketi omnidirectional, izvi zvinoitika nekuti iyo iPhone 6 haigone ku "beamforming", zvisinei hazvo iyo iPhone 6s kana yakakwira iri, idzi iPhone ne iPad Air 2 vane Wi-Fi chip ine MIMO tekinoroji iyo inobvumidza iwe kutora mukana kune ese mabhenefiti eiyi tekinoroji.
NAS (Network Yakabatanidzwa Yekuchengetedza)
Mamwe ma routers anosanganisira chiteshi cheUSB, vamwe vanotove nedhiraivhu rakaomarara mukati, ma routers aya anotsigira kana anosanganisira kushanda kweNAS, izvi zvinoreva kuti chengetedzo mudziyo woishandisa kure.
Semuenzaniso, mamwe ma-high-performance mairaira anosanganisira rakaomarara dhisiki mukati uye anotendera iwe kuti uite zvinhu izvo kusvikira zvino pasina munhu angadai akafunga nezve rauta, senge:
Nguva Muchina: NeMac, network hard drive inogona kugadzirirwa kuti iite seTime Machine, nokudaro ichiita kuti ikwanise Mac kuzvitsigira pachayo kune iyi hard drive otomatiki uye isina tambo.
Kuchengeterwa kure: Tinogona kushandisa iyi hard drive sekure kure kuchengetedza, hongu kuverenga / kunyora kumhanya kunogumirwa kwete chete nechero chekuchengetera asiwo nekumhanyisa kweiyo Wi-Fi kana wired network, zvisinei isu tinogona kuendesa mafaera senge mafoto kana mavhidhiyo kunetiweki iyi hard drive uye wozviona kubva kune chero chinhu chishandiso (senge yedu smartphone kana terevhizheni) tisingafanirwe kurodha pasi.
Torrents maneja: Mamwe ma routers anotobvumidza kuve neane maneja maneja, iyi ndiyo kesi yeiyo Xiaomi Smart Router 2 iyo inokutendera iwe kutumira hova kune iyo router uye kuti inozvirodha kune yako yekuchengetera chishandiso pasina kana chero mimwe michina inomhanya.
FTP server: Izvi zvishandiso zvekuchengetedza zvinogona kumisikidzwa kuti zviwanikwe kunyangwe uchiri kure nemusha, chero bedzi router yedu iine internet yekubatanidza, iyo yekuchengetera mudziyo ichave iinewo, saka isu tinogona kuve neiyo inomhanyisa-inomhanya online online sevhisi (yakatarwa nemhando kubatana kwakabvumiranwa) pamutengo watinoda (wakatarwa nenzvimbo yekuchengetera uye nemutengo wechigadzirwa) nenzvimbo yatinoda.
Smart QoS, pamwe inonyanya kukosha chinhu
QoS ndicho chidimbu che Hunhu hweSevhisi (Hunhu hwebasa muchiSpanish), ichi chinhu chakakosha kwazvo mudzimba umo mune akasiyana profiles.
Semuenzaniso, kana iwe uine nhengo yemhuri mumba inotamba mitambo yevhidhiyo yepamhepo, mumwe anowanzo tarisa yakawanda yekushambadzira vhidhiyo sevhisi seYouTube kana Netflix uye / kana mumwe anoshandisa mapurogiramu erukova, iwe unenge uchigara mu mamiriro edzimba dzakawanda umo kubatana kunounza matambudziko pakati pevashandisi.
Nhaurirano zhinji dzinogona kupera nekubatanidzwa kwechigadzirwa chinosanganisira Smart QoS, kuita uku kunogona kutora matanho mune izvi sekuisa pamberi pe traffic uye / kana garandi yeiyo shoma bandwidth, kuti iwe unzwisise zviri nani ini ndichakutsanangurira iwe:
Si mushandisi ari kutamba mutambo wepamhepo ingave sei League of Legends uye mumwe achiona mavhidhiyo paYouTube kana Netflix, Vashandisi vaviri ava vachange vachimisikidza traffic kuburikidza neiyo router, kuitira kana isina QoS iyi router inotumira data rinodiwa kune internet painosvika, pasina odhiyo yekutanga. Nekudaro, izvi zvinhu zviviri zvakasiyana, mutambo wepamhepo unoda yakaderera latency, izvi zvinoreva kuti mapakeji anoda kusvika nekukurumidza kuseva uye kudzoserwa nekumhanyisa kwakafanana, mutambo muLigi YeLegends mutambo uine chinguva che1 awa inogona kuve mubhadharo we70MB chete, zvisinei kutenderera mavhidhiyo kubva kuYouTube kana Netflix hakudi iyo latency imwechete asi bandwidth uye kurodha kumhanya, aya mavhidhiyo emhando yeHD anogona kuburitsa mazana eMB kana kunyange 1 kana 2 GB yekushandisa muawa, mashandisiro maviri ye network inoda zvido zvakasiyana.
Nekutanga kwekufambisa kwetrauta ine Smart QoS, iyo router inoziva chiitiko cheumwe neicho uye zvavanoda, nekudaro kuve nekuona kushomeka kwekupedzisira kwemushandisi ari kutamba (izvo zvinomutendera kudzora mavara ake munguva chaiyo pasina kunonoka ) uye bandwidth yakakwana uye yekumhanyisa kumhanya kune iye mushandisi ari kuona kutenderera vhidhiyo (uyo anofarira vhidhiyo pasina zvinokanganisa uye zvakare haazovhiringidza wekutanga mushandisi).
Minimum bandwidth vimbiso:
Aya mamiriro anogona kuitika nemamwe marudzi evashandisi, senge mushandisi anoona anotenderera mavhidhiyo uye mumwe arikutora mafirita, mushandisi wekutanga (kuitira kusava ne router ne Smart QoS) achaona kuti mavhidhiyo avo haatakure zvakanaka uye vanotambura kumbomira nekuti wechipiri mushandisi ari kushandisa ese bandwidth paanotora kurukova, izvi zvakafanana nemugwagwa, wakafara mugwagwa, mota zhinji dzichakwanisa kupfuura panguva imwechete (bandwidth), zvisinei pasina Smart QoS hapana anoti mota inogona kupfuura nepapi, ingaite senzira isingateedzerwe.
Kutenda Smart QoS uye yayo bandwidth garandi, iyo router ine iri basa ichapa yakaderera bandwidth kune yega yega mushandisi, uyu mushandisi achave nechikamu chemugwagwa akavimbiswa kuitira kuti mota (mapakeji) avo vapfuure neayo pasina mumwe mushandisi anogona kuvhiringidza yavo nzira, nenzira iyi zvinove nechokwadi kuti munhu wese anogona kupfuura uye kuti hapana anopinda munzira yemumwe.
Nenhungamiro iyi unenge wakagadzirira kuongorora mamiriro ezvinhu mumba mako kana kubasa, funga nezvekubatana kwawakaita, tarisa kuti yako router iri kune izvi uye kunyangwe zvishandiso zvako (kunyangwe kana usina yakanaka fiber optic router inogona gadziridza zvakanyanya kubatana kwako nekuita zvirinani kuita mabasa akaita seAirPlay kutenderera, kugadzirisa Torrents kurodha pasi, YouTube uye online online zvikamu kuitira kuti vamwe vasazokanganisa vamwe kana kutovandudza kusvika kwenetiweki yako kunzvimbo dzeimba mune izvo zvakambouya zvisina kujeka ).
Ruzivo rwakakosha zvakare musarudzo ye router inogona kuve processor uye RAM yakaiswa, ndinoziva izvi zvinogona kutaridza kuwedzeredza asi processor iri nani iyo router ine, zvirinani zvichakwanisa kuita sarudzo nezve traffic inopfuura napo, uye iyo yakawanda RAM yainayo, mapakeji akawanda ainogona kuchengeta kuti ikwanise tumira imwe mushure meimwe pasina vashandisi vachiona kubatana kwavo kuchinonoka.
Iyo nyaya inogona kuve yakaoma, zvisinei hazvo, kiyi ndeye kutsvaga mhando yemhando pamutengo wakanaka, hazvidiwe kutenga komputa yepamusoro inotarisira kubatana kweimba yako, zvisinei router yakaipa inogona kukuvadza zvakanyanya ruzivo rwako rwevashandisi.
PaInternet unogona kuwana mairaira akanaka anowirirana neazvino waya waya ekubatanidza zviyero, ane NAS kana anoenderana nayo uye anotove neakawanda antenna uye iyo Smart QoS basa, dambudziko nderekuti ma routers mazhinji eiyi maitiro anowanzo kuve zvakaoma kugadzirisaVamwe vanotova nemaantina eantunyu ayo asiri kana hafu yehukuru hweiyo mapurasitiki anoita kuti vaone (kuvhura iwo manyanga mazhinji aratidzira kunge ari pasi pe50% yezvavanogara).
Yakakurudzira ma routers
Vamwe mairaira andinokurudzira ini pachangu Ndizvo:
Xiaomi Mi Wifi 2 - € 30 - Iyo yakachipa yakachipa NAS inoenderana 802.11ac MIMO Wi-Fi router iwe yaunogona kuwana, yakafuridzirwa neApple's Magic Trackpad, ichafadza chero hukama hwepamba. Ese maXiaomi ma routers anosanganisira kunyorera kweIOS uye Android uye yakapusa interface.
AirPort Express - € 109 - Apple yakachipa kwazvo router, kunyangwe iine mamwe mabasa echinyakare kupfuura eiyo Xiamo Mi Wifi 2, kune vanhu vasingade kutenga zvigadzirwa senge Xiaomi, panguva ino isu tine router inoenderana neiyo 802.11n standard, inokwana dzimba zhinji, pasina kusangana kweNAS.
Xiaomi Smart Router 1 (1TB) - € 124 - Chizvarwa chekutanga cheiyo Xiaomi's advanced router, yekutanga pane iyo runyorwa iyo inosanganisira NAS nekumisikidza, ine slot pazasi yekubatanidza hard drive (inosanganisira 1TB imwe) uye inoenderana ne beamforming, yakajairwa 802.11ac uye SmartQoS.
Xiaomi Smart Router 2 (1TB) - € 150 - Yepamberi kupfuura yapfuura (yakanyanya kunaka mumaonero angu) uye ine 1TB yakavakirwa-muNAS, iyi router inoenderana neiyo 802.11ac standard, beamforming technology, torrent manager, Smart QoS, otomatiki backups uye nezvimwe zvakawanda. . ...
AirPort Zvakanyanyisa - € 219 - Apple yakanyanya yepamusoro NAS router inoenderana (isina kuiswa), inoenderana neiyo 802.11ac standard, beamforming, ine huwandu hwesere antenna mu6X3 MIMO system (3 ye3GHz uye 2 ye4GHz), USB 3 chiteshi uye smartphone kunyorera.
AirPort Yakanyanya Nguva Capsule (2TB) - € 329 - Muchidimbu, iri AirPort Yakanyanya ine yakavakirwa-2TB hard drive iyo inobvumidza iwe kuita yemuno Time Machine kuburikidza newe-Wi-Fi network, kuti ugone kugadzira otomatiki mabhakiti eMac yako zviri nyore uye pasina tambo .
Xiaomi Smart Router 2 (6TB) - € 539 - Iyo imwecheteyo Xiaomi router mune yayo 6TB vhezheni, kune vanonyanya kuda uye vanotsvaga kutora mavhidhiyo avo ese, mafirimu, mapikicha, backup makopi uye vamwe pane ino router.
#Ziva: Ese maXiaomi ma routers ane software yakavakirwa pa OpenWRT, vhezheni yeLinux yea routers. Pane app inonzi Wifi yangu muAppStore neGoogle Play iyo inoshandiswa kumisikidza kubva kune yedu smartphone kana piritsi uye inowanikwa muChirungu (yeApple pane Spanish vhezheni yakashandurwa nharaunda munharaunda yeMIUI foramu), iyo webhu interface yeaya ma routers inongowanikwa mu Chinese Kunyangwe izvi, kana tikachiwana kubva kuGoogle Chrome browser tinogona kuchidudzira muchiSpanish zvakakwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Super Giraidhi kuti unzwisise yako Wi-Fi kubatana uye kuiisa padanho reiyo yako iPhone, Mac uye zvimwe zvishandiso.
Yakanaka kwazvo inodzidzisa uye yemhando yechinyorwa, asi mubvunzo unomuka: neIOS zvishandiso, ini ndakangokwanisa chete kumhanyisa yeangu Wi-Fi kubatana, neAir application yeApple mairaira. Pane chero nzira yekuziva kumhanyisa kweiyo Wi-Fi kubatana, nemarairi asina kana chairo application? Kutenda kuzhinji.
Ndiri kutya kuti chinhu chega chaunogona kuita kutsvaga paInternet kune iyo modhi ye router yaunoda kuziva nezvayo, dzimwe nguva inoonekwa mukugadziriswa kwewebhu, asi dzimwe nguva kwete, uye mumamiriro ezvinhu iwayo hapana nzira yekuziva zvechokwadi inovimbika kupfuura kutsvaga webhusaiti yemugadziri kana zvimwe zvinopa ruzivo nezve chishandiso ... Nekuti ini ndinonzwisisa kuti unoreva kutsvaga muyero wainoshandisa.
ndatenda, ini handireve muyero, nekuti ini ndinoziva kuti zvese iyo router neangu iPhone iri. C., uye ini ndiri kubatanidza kune shanu gigahertz bhendi. Izvo zvinoitika ndezvekuti ndisati ndashandisa iyo AirPort yakanyanyisa, uye kuburikidza neAirPort application ndaigona kuona kwese kubatanidza kweWi-Fi kune iyo router, uye kumhanya mumamega byte pasekondi Chokwadi ndechekuti jazztel yakandipa router nyowani, kubva standard 802.11 kusvika C asi ini handina nzira yekusimbisa kumhanya kweiyo Wi-Fi chinongedzo pakati peiyo iPhone neiyo router, saka ndanga ndichibvunza kana iwe uchiziva chero chekushandisa chinondiudza kumhanya kwekubatana pakati peiyo router neiyo iPhone . kutenda kuzhinji.
Jose Luis akadaro
Ndingati zvakapusa, asi ... haukwanisi here kubatanidza Airport yakanyanyisa mushure meJazztel router? Izvi zvinogona kukupa iwe masevhisi awanga uine AirPort, handiti? Iwe unogona kutobatanidza iyo AirPort pane imwe nhanho kure kure neimba iko tambo yaizosvika uye nokudaro ichiwedzera huwandu hweWi-Fi kutenderedza imba, handiti?
Ehezve, ini handizive kana rauta yaizo "bvongodza" imwe uye isu tingave tiri kupusa tese.
Pindura kuna Jose Luis
zvakanaka, iyo AirPort handisisina, iyo inogona kunge iri mhinduro zvakadaro seizvi uye handife ndakakwanisa kuyera kumhanya chaiko kwekubatana kwangu kweWi-Fi. Ini ndichafanirwa kubatanidza Windows komputa kune iyo router kuti ndipe iyo chaiyo kumhanya kweangu Wi-Fi kubatana.
Shamwari ine utsinye, chinyorwa chakanaka.
Ndatenda kwazvo 😉 Ndinovimba yakushandira iwe!
Ehezve, ini handizive kana imwe router yaizo "bvongodza" imwe uye isu tingave tiri kupusa tese.
Ndatenda nechinyorwa ichi. Zadzisa uye zvakajeka. Kwaziso
Pindura kuna DanielCip
Icho chinyorwa chakanaka pamwe nekushoropodza zvinopfuura chimwe chinyorwa pane ino peji, zvakanaka kutaura kana ivo vari vakuru. Ndinokukorokotedza iwe hama basa rakakura. Kwaziso
Pedro Ruiz akadaro
Kwakanaka wongororo yemusoro wenyaya. Iwe unofanirwa kuiburitsa mune yakakwira maitiro magazini nekuti yakanyatso kukwana. Kwaziso kubva kuMexico.
Pindura Pedro Ruiz
Yakanaka, chinyorwa chemhando yakadaro chakarasika pane ino webhusaiti
Diego Villa akadaro
Nyaya inoratidzika kunge yakaoma, unoitsanangura nemaapuro uye zviri pachena, maita basa, chinyorwa chakanaka
Pindura Diego Villa
Sergio Cruz  akadaro
Yakanaka chinyorwa. Ndatenda zvikuru nguva yako uye nekuigovana.
Pindura Sergio Cruz 
Pakupedzisira mumwe munhu anotsanangura chimwe chinhu chakaomarara nenzira yakapusa asi nehutsinye uye nekudzika. Makandibvisa mukukahadzika kuzhinji. Iwe uri mudzidzisi. Makorokoto.
Apple inogadzira yakakura dhizaini neA9X